China chakaita zvokugadzirwa mica upfu fekitari uye bhizimisi | Huajing
Chakaita zvokugadzirwa mica upfu zvizorwa kushandisa chakaita zvokugadzirwa mica anorova sezvo mbishi zvinhu, flakes zvose dzakanyatsosarudzwa pamberi kugadzirwa kuitira kuti ruvara uye zvakafanana zvakafanana. Iyo yekugadzira mica upfu hwezvizoro inogadzirwa neHuajing patent mvura yekugedza tekinoroji. Iko hakuna chemakemikari uye kusvibiswa mukuita.
Chakaita zvokugadzirwa Mica Powder
Chinhu ruvara kuchena (Lab) Saizi Particle (μm) D50 pH Hg (ppm) Sezvo (ppm) Pb (ppm) Cd (ppm) masasi （%） chimiro chakaringana huwandu hwakawanda g / cm3 kubwinya Kushanda
HC400 chena 96 20 ～ 23 7 - 8 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ＜ 0.5 150 0.22 Matte & inopenya Isiri inorema simbi chinhu, Yakakwirira pachena kuvhara & kuchena Ganda rinoshamwaridzika,
HC800 chena 96 10 ～ 13 7 - 8 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ＜ 0.5 180 0.14
HC2000 chena 96 5, 7 7 - 8 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ＜ 0.5 140 0.11
idya kuramba ruvara Kuoma kwaMohs huwandu hwekudzivirira pamusoro resistivity (Ω) Nzvimbo yakanyunguduka kubaya simba Kuchena Kukotama
1100 ℃ Sirivheri 3.6 4.35 x 1013 / Ω.cm 2.85 x 1013 1375 ℃ 12.1 > 92 ≥45
chena KV / mm R475 Mpa
Chakaita zvokugadzirwa mica upfu zvizorwa kushandisa chakaita zvokugadzirwa mica anorova sezvo mbishi zvinhu, flakes zvose dzakanyatsosarudzwa pamberi kugadzirwa kuitira kuti ruvara uye zvakafanana zvakafanana. Iyo yekugadzira mica upfu hwezvizoro inogadzirwa neHuajing patent mvura yekugedza tekinoroji. Iko hakuna chemakemikari uye kusvibiswa mukuita .so kuti uve nechokwadi chekuti chidimbu chega chega chemhando yepamusoro yekugadzira kristaro inogona kuenzaniswa nepakati mu mica poda ine yunifomu inoyera size uye inoenderana gloss. Zvakanakira zvaro zvinoita kuti chigadzirwa chekupedzisira chiratidze kuchena kwakakwirira uye kusachinjika kwepamusoro, pasina chinorema chesimbi uye chinhu chinokuvadza. Izvo zvinoita kuti uve nechokwadi chekuti iwe unokwanisa kushandura kunze kunonyanya kuzivikanwa zvizorwa zvigadzirwa. Synthetic mica poda inongokodzera yemhando yepamusoro yemhando yemhando, senge matte, mercerized uye inosimbisa. Icho ndicho chinhu chakanakisa chepamusoro-kumagumo zvigadzirwa zvekuzora.
Ndezvipi Zvakakosha Zvivakwa Zvekushambadzira Giredhi Mica Powder Zvine?
Wet pasi mica ine yakanaka makemikari kugadzikana. Wet pasi mica ine zvidimbu zvakanaka, acid uye alkali kuramba, kukwegura kuramba uye yakanaka inodzivirira basa kune ultraviolet mwaranzi. Mushure mekuchenesa kwakanyorova, kuchena kwayo, kuviga simba, kubwinya, kutsetseka, kusagadzikana uye kunamatira kunovandudzwa zvikuru. inogona kusanganiswa zvakaenzana nemvura uye glycerin, uye magadzirirwo ayo akanaka uye akasimba. ndiyo yekutanga-kirasi mbishi zvinhu zvepamusoro-giredhi makozimetiki uye chinhu chakasarudzika che cosmetic hwaro, uye inogona kushandiswa se emulsion, kirimu, pearlescent mumiririri uye nezvimwe zvinoshandiswa.
Iwo Akakosha Mhedzisiro Uye Kushanda Kweyakagadzirwa Mica Mune Zvizoro
Synthetic fluorophlogopite iri mhando nyowani yezvinhu zvisina kugadzirwa nekristaro izvo zvinoenzanisira iyo mineralization yemasikirwo mica. Izvo hazvine chete nekuita kwechisikigo mica, asi zvakare ine yakachena kuchena uye yakakwira kuchena, uye kuita kwayo kwakanyanya kukwirira kupfuura iyo yechisikigo mica. Izvo zvinhu ndezve silicate, lamellar, hexagonal crystal zvinhu. Nekunaka, inogona zvakare kugadzirwa kune isina-kupenya chimiro. Muzvizoro, inonyanyoshandiswa seye colorant kuwedzera uye kuwedzera kupenya kwezvizoro, izvo zvinowedzera magadzirirwo nekubata kweganda. Haizopindirwe neganda, nekuti izvo zvicherwa hazvizokonzere chero kukuvadza paganda, kunyanya kusimudzira kupenya kwekuona kwezvizoro.
Production chinzvimbo: 150toni / mwedzi
Kurongedza: 40KG / 25KG / 20KG, (PP kana Pe bhegi)
Nzira dzekutakura: mudziyo kana hombe
Pashure: Pearlescent mica upfu
Zvadaro: Natural Muscovite mica upfu
Glitter Makeup Ine Yakagadzirwa Mica
Chakaita zvokugadzirwa Mica Highlighter
Chakaita zvokugadzirwa Mica Sheet